यसपालिको तिहारमा सयपत्रीको माला सस्तो पर्ने, एउटा मालाको कति रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ला ? | Ratopati
काठमाडौं । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु हुन अब एक साता बाँकी छ । तिहार रंगीचंगी बत्ती, सयपत्री, मखमली र झिलिमिलिको चाड हो । बजारमा तिहारको चहलपहल सुरु हुन थालिसकेको छ ।
तिहारको बेला सयपत्री, मखमली फूलको मालाको माग अत्यधिक हुने हुँदा मूल्य आकासिन्छ र उपभोक्ताहरु महंगीको मारमा पर्छन् । तर, यस पटक भने आम उपभोक्ताले फूलको मालामा केही राहत पाउने भएका छन् ।
यस वर्ष तिहारमा २५ लाख मालाको माग रहेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसमध्ये १८ लाख सयपत्री तथा सात लाख गोदावरी र मखमली मालाको माग रहेको
एसोसिएसनको अध्ययनले देखाएको छ । १८ लाख सयपत्रीमा साढे १५ लाख माला नेपाली उत्पादनले नै धान्ने कसजुले बताए । नपुग साढे दुई लाख माला भारतबाट आयात हुनेछ ।
गत वर्ष २२ लाख मालाको माग थियो, त्यसमा ३ लाख भारतबाट ल्याइएपनि १ लाख मात्र प्रयोग भयो । बाँकी दुई लाख डम्पिङमा गएको थियो । प्रत्येक बर्ष झण्डै १५ प्रतिशतका दरले फूलको माग वृद्धि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
एउटा मालाको कति पर्छ ?
यो एक मिटरको मालाको मूल्य हो । लम्बाइ अनुसार मालाको मूल्य बढ्दै जानेछ । गत वर्ष ८० रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँसम्ममा माला बेचेको उनले जनाए । यद्यपि, मालामा व्यवसायीहरुले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका आरोप लाग्दै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा झन्डैै २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको फूलको कारोबार भएको थियो । विदेशबाट १९ करोड रुपैयाँको पूmल आयात भएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
हाल १५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा झन्डै ७०० बढी व्यवसायिक किसानहरु पुष्प खेती आवद्ध छन् ।